Ividiyo incoko amagumbi-intanethi kuba free - IVIDIYO INCOKO-Uthando-intanethi!
Jan Dissuader, i-immigrant ukusuka kwi-Germany, wandixelela ukuba kukho unspoken imigaqo xa kufuneka ahlangane kwaye zithungelana kwi-GermanyKulungile, eli bali iya kuba superfluous, ngenxa lokuqala isiqingatha kufuneka ukunxulumana uthotho iintlanganiso. Indlela impendulo eziqhelekileyo umbuzo"Molo, njani ingaba wena? Jan rhoqo advises ukuba abe emfutshane kwaye ingabi spit ngaphandle zonke iinkcukacha ngawe buqu ubomi bakho ukuba umntu ufuna uthetha ukuba."Akukho mfuneko cinga lo mba njengoko i-incentive ukuthetha kwi-inkcukacha malunga yakho ukuthelekisa iintshukumo kwaye, ngaphezu kwazo zonke, ukuya kuxelela malunga yakho iingxaki. Nkqu ukuba wena ukuba ufuna mamelani, uza kwenza thabatha impression kwi mbambi-dliwano-ndlebe.
Kwi-Germany, akubanga nomthetho ukuba"thumela"nkqu vala nezinamandla, vumelani kuphela abahlobo kunye acquaintances.
Lumka kwaye umamele njani yena okanye yena lunika ngokwakhe okanye herself. Yiyo kanye kanye yintoni, kwaye ke kukunceda kakhulu ubizo:"Ukuba, xa intlanganiso ikhangeleka ngathi olugqityiweyo incoko iqabane lakho, umzekelo (kwi-uluvo promotion) okanye, yona icinga ukuba idilesi uyaya kuye nge-eli isimaphambili phambi igama: okanye".
I-Germans ingaba highly valued."Yintoni ukuthetha malunga kwi-ongaziwayo society.
Funda lo unguye ka-elula incoko, njengoko Americans bayibize."Ezilungele izihloko lwengxoxo kwi company ingaba imozulu, inkcubeko, iiholide, emidlalo."Mna kuba phantse zange kuvakala politics, ukugula, okanye abanye abantu ke personal ubomi. Kulungile, kwi-Germany akuvumelekanga nomthetho ukuba kuxoxwe ngokulawulwa imali ngawo onke.
Le mbasa i-invasion ka-yangasese kwaye sifuna kuba uthabatha zoko."Oko kwenza ukuba wena musa ukuqonda okanye misunderstand omnye umntu? Oku kanjalo sele eyakhe unwritten umthetho: kufuneka ucele kwakhona, kwaye akumele calmly jika jikelele."Ukuba ufuna wabuza into kodwa isijamani ulwimi hayi ke okulungileyo kwaye ongayiqondiyo yintoni, ndazise kuni na ukushiya quietly, kodwa kuphela ukuba kuthi ukuba ongayiqondiyo ingxaki.
Phrases kufuneka usoloko yiba yinxalenye Yakho linguistic Arsenal kwaye kufuneka rhoqo uncedo ukuseka uqhagamshelane.".
Kwimeko engalindelekanga intlanganiso iindawo kwi-Germany kwi yenkcubeko kwaye ukuzonwabisa imiba kwi-Germany kwaye Europe
Abanye abantu ukuba resort enye Dating iindlela
Ukufumana ukwazi Sasejamani ingaba kwenzeka naphi na: kwi-iinkwenkwezi, restaurants, uncwadi, ingxelo, fitness centers, okanye inkampani
Kwaye abo awunakuba fumana zabo, umphefumlo mate kwi-yokwenene ebomini, unako yiya Dating zephondo.
Ngokunxulumene isijamani researchers, amashumi amathathu ipesenti ye-Intanethi abasebenzisi kwi-Germany ingaba abantu abaqhelekileyo kunye ezi ziza. Kwaye yintoni abanye benze.
Makhaya amaziko olondolozo lwembali kwaye exhibitions umbutho kwi-Bremen iza kuphela yenza abantu rhoqo.
Karin Guadi, i-imvumi yi-khondo lobungcali-mfundo lilonke, kutshanje wathabatha inxalenye kule utyelelo.
I-exhibition ngomhla unguye mifanekiso yangcwaliswa ukuba isidutch ukupeyinta. Kwaye emva utyelelo, abathatha inxaxheba, ishumi elinesine abafazi ishumi babantu, ukuba invited ukuba i restaurant kwi igalari kuba a glass of iwayini. Abantu ayikwazi share zabo impressions into bazibona kwaye yintoni babesazi. Oku kubaluleke kakhulu ngakumbi umdla kwe-i-ngokuhlwa wachitha ekhaya yedwa,"yena stressed kwi-udliwanondlebe i-isijamani-Arhente ukuba initiated oku"Museum"kwephulo"Teresa Longu". one-yeminyaka ubudala Nord Bert waye kanjalo pleased kunye ngokuhlwa: -ndandidibana a kubekho inkqubela ekuthiwa Karin Guadi. Ndiyathemba ke akusebenzi khange yethu yokugqibela busuku,"he smiled. I-Kunsthalle kwi-Bremen kugqitywe ukuba yithi rhoqo kuzimasa inkqubo kuba abantu, kunye umahluko kwi age iindidi. Ngoku kokuba amisele Museum utyelelo kuba kunoko abantu amashumi amathathu ukuba amane ubudala.
Nangona ngakumbi abafazi kunokuba abantu kuza kwabanjalo trips,"sicinezela le projekthi ke promoter, Teresa Longu,"siyathemba ukuba zethu phulo kuya kuvumela kuthi ukufunda kangangoko kunokwenzeka malunga abantu abakufutshane ikhangela ubomi partners."Elona ziko lolondolozo lwembali libalaseleyo abasebenzi sele uyazi yintoni budlelwane nabanye kukho phakathi kwabantu ndandidibana ngexesha lam excursions.
Ndiza ngokuqinisekileyo ayithethi ukuba ngenene mba, Teresa Longu. Zethu mifanekiso kufuneka babe intlanganiso ndawo. Ngoku sino enjalo proposal. Inikezela kuba icacile ingaba kakhulu diverse. Kwi phezulu Dating zephondo.
Noko ke, asinguye wonke ubani likes oku ukukhangela indlela yesibini nesiqingatha.
Germans kwaye Sasejamani ingaba kujike ungena kwi romanticcomment ubudlelwane abemi okanye abemi ka-kwamanye amazwe. Rhoqo ezi budlelwane nabanye end emtshatweni. Ngoko ke, abancinane-ezaziwayo iinyaniso malunga biography ka-Cupid Eros kwaye considerations malunga ne-intanethi Dating zephondo uncedo ukuze uqonde oko uthando ngu.
Impumelelo ayikho guaranteed, kodwa kuyenzeka
Oku kwaba kuchazwe kwi-i-enze udliwano-ndlebe yi-ibhanki ngoku i-exhibition kwi-Bremen. Wonke ngomzuzu kwi-Germany ziphantsi ngothando kunye lonely umntu umntu,"uthi ad kuba omnye Dating zephondo. Kodwa kangakanani baye ngokwenene ukwazi ukufumana iqabane lakho kwi-Intanethi. Abameli abanye professions nabo bahlala kwi-Germany kuba buthathaka kwaye trust abanye ngakumbi. Entsha iziphumo zokukhangela bonisa veil. Young abantu bakhetha kuhamba kuyo iipere okanye amaqela. Kwaye ukuba kunjalo, ngoko ke baya ahamba yedwa, yedwa, armed kunye imithetho ngokukhawuleza Dating. Mna balingwe ukufumana wam comment kwi-Intanethi, kodwa andiyenzanga unayo nayiphi na comment. Ngenxa yam imihla, kufuneka unxulumano ngqo,"sighs elide-ixesha Sven Bode ukusuka Chiglia. Kuba malunga unyaka ngoku, lowo wenziwe omnye organizers kwephulo"Isinqumli iimifanekiso: Amaxwebhu kuba icacile". Ezi screenings zenzeke ngendlela ezahlukeneyo izixeko kwi-Germany. Kwi-avareji baya khona malunga a anamashumi abantu, umzekelo, kwi-Flensburg, Bremen kwaye Hamburg. Le nkqubo ibandakanya omfutshane wefilim malunga uthando. Ekupheleni ntlanganiso, abantu bahlanganisane kwi-lobby ye-cinema kwaye uxoxe prospects kwi bar. Baya zithungelana ukufumana ukwazi ngamnye enye. Ngokunxulumene organizers kwephulo, abaninzi abantu kuqhubeka zithungelana, nkqu emva ukudibanisa izimvo zabo kwi-cinema.
Elikhulu izixeko kwi-Germany, ezikhethekileyo nee-arhente kunikela iinkonzo asebenzise i-Intanethi, kwaye unmarried abafazi kwenzeka"gastronomic eyimfama imihla"- eyimfama imihla.
Umgaqo ngu njengokulandelayo: bolunye uhlanga kuhlangana ukutya kunye kwaye exchange recipes, ngokunjalo ukwenza abahlobo okanye nkqu kuwa ngothando. Kwi-yolungiselelo imicimbi, ekhethekileyo kwi-Intanethi portals zisetyenziswa: abanye yenze kuba imali, abanye kunikela iinkonzo zabo for free.
Abo njenge ukulungisa kwaye kuhlangana abantu abatsha angafaka isicelo kwi-intanethi.
Okhethekileyo msebenzi kukuba ukulungiselelwa sangokuhlwa akusebenzi zenzeke ngendlela enye apartment kwaye hayi kwi-wonke wesithathu apartment ebekwe kwi-ezahlukeneyo iindawo zesixeko. Mntu ilungiselela a salad okanye soup, omnye engundoqo kunjalo, umntu wesithathu dessert. Kwaye kwangoko kufuneka ahlangane omnye amathathu abantu kuba sangokuhlwa. Nkqu esixekweni, kukho dozens ezinjalo iintlanganiso. Emva sangokuhlwa, onke amalungu ezahlukeneyo amaqela ingaba invited ukuba Jikelele umntu, ikuyo baya exchange amava, share recipes kwaye ifowuni amanani. Oku kuko organizers ka"Sangokuhlwa sebumnyameni"ingaba. Imbono yethu kukuba unike abantu ithuba zithungelana nabanye abantu yokwenene ebomini, ukwandisa i-yenza isangqa ka-abahlobo,"i-portal u-dala isiqulathi-zifayili sicinezela. Kuba abo kuba kuza elitsha kwisixeko nzulu okanye umsebenzi, umzekelo, ukuya kufumana isidlo sasemini - elikhulu ithuba ngokukhawuleza yandisa isangqa ka-unxibelelwano."Abantu evela kwamanye amazwe enrich ezi celebrations, ngenxa yokuba ingaba abantu abaqhelekileyo hayi kuphela kunye cuisine kwezinye Izizwe, kodwa kanjalo kunye zabo imicimbi yayo,"Florina wathi kwi-i-enze udliwano-ndlebe. Ngokunxulumene naye, lakhe Internet portal iququzelela njengokuba sangokuhlwa kwi-Aachen, Berlin, Hamburg, Frankfurt kusasa engundoqo. Kulo nyaka, amashumi amabini anesihlanu amawaka abantu bathabathe nesabelo kuyo. Mhlawumbi eyona famous asazanga kwi-imbali cinema - i-asazanga ka-O'hara (idlalwe ngu Vivien Leigh) kwaye Rita Butler (Clark Gale). I-ukuziqhelanisa eyona - uthengisa wefilim"uhambe nge omoya"yi-Margaret Mitchell-yokuqala epheleleyo-umbala Hollywood umbala wefilim le umlinganiselo. Kwaba bakhululwe kwi-wefilim ekupheleni ngonyaka, Atlanta. Eli lelona famous ukupeyinta ka-Gustav Klimt ke ixesha. Bubizwa"i-Asazanga"(- gr.). Kwi umboniso - a fragment ye-umboniso. Ngojulayi kulo nyaka, wedding ka-elonyuliweyo Diana Frances Spencer kwaye Prince Charles wathabatha indawo elondon. I-national iholide waye wavakalisa kweli lizwe.
Kwaye bride kwaye groom ngoko ke ngokungalindelekanga elubala congratulated ababukeli bomdlalo bangene nge asazanga.
Kodwa beautiful fairyname ibali waphela kwi-tragedy: ngonyaka emva wokuqhawula umtshato, i-Princess of Wales wabulawa kwi car kunokwenzeka ingozi. I-famous asazanga ka-Madonna kwaye Britney Spears ngexesha umculo mbasa eyodwa, waya kwi-imbali kisses hayi kuphela yi nabo langoku kwi-ababukeli bomdlalo bangene, kodwa kanjalo yi-ifeni jikelele ehlabathini.
Okhethekileyo ndawo imbali nzima"fraternal Communist asazanga".
Ngaphandle tripling, kwakungekho intlanganiso Communist umntu.
Ezona famous asazanga ka-Leonid Brezhnev kwaye Erich, ngokusekelwe Dmitry Vrubel ke graffiti kwi fragment ye-Berlin eludongeni, oku photo iwubeke phambili amaphepha ka-iimagazini ukusuka jikelele ehlabathini.
Umhla phezu Victory Japan kumaxesha isikwere"(eyaziwa njenge:"asazanga") yi intsomi ithathwe"kwi watering unako".
Eyona kwi-intanethi Dating videos
ubhaliso ividiyo incoko amagumbi dating girls free omdala dating ividiyo fun phones fun ngaphandle umnxeba ividiyo incoko -intanethi free dating site ngesondo Dating bukela ividiyo ividiyo incoko kuphila Dating ividiyo Dating akukho ubhaliso